Tricks yekuvandudza hupenyu hwebhatiri muIOS 14 | IPhone nhau
Kuzvitonga chishandiso chagara chiri chinhu chinopokana patakataura nezve iyo iPhone Nekufamba kwenguva uye kusvika kwe "hombe" zvishandiso izvi zvave kugadzirisa zvishoma, zvisinei, inoramba iri imwe yezvinonetsa zvikuru zvevashandisi. Tiri kuzotarisa nhasi pane zvidiki zvidiki zvinogona kutibatsira zvakanyanya.
Isu tinokudzidzisa iwe kuti ungawedzere sei kuzvitonga kweyedu iPhone zviri nyore uye nekukurumidza. Izvi ndizvo zvese zvaunoda kuti uzive mushure mekuuya kweIOS 14 kuitira kuti umire kuchaja yako iPhone kakati wandei pazuva, saka usapotsa izvo zvatinofanira kukuudza pano nhasi.
1 Kuvandudzwa kwemashure
2 Kugadziriswa kwenzvimbo
3 Otomatiki kupenya uye «simudza kuti uite»
4 4G inokosha here?
5 Matipi madiki ekuwana bhatiri
Isu tinotanga neyekare kuzivana kuri kukonzeresa kurwadziwa kupfuura kubwinya pane zvishandiso zveIOS. Kusvika iye zvino, chaiyo-nguva multitasking paIOS haichakwanise nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, kunyangwe hazvo izvo Pictre-in-Mufananidzo iri kuita kuti zvinhu zvive nyore.
Zvisinei, Apple inobvumira mamwe maitiro kuti ashande "Kumashure" apo isu tichiita mamwe marudzi emabasa. Zvirinyore rinozvitendera neimwe nguva uye kuita kwekuganhurirwa. Uyu uchave wekutanga musoro watichadimbura.
En Zvirongwa> Zvakajairika> Ruzivo rwekumashure isu tichakwanisa kuona kuti nekumisikidza zvese zvinoshandiswa zvinomisa kuita uku pane yedu kifaa. Izvi zvinongoshandisa zviwanikwa uye bhatiri zvisina basa, nekuti kurodha pasi zviri mukati meWhatsApp kana Twitter zviri kungo chengetedza isu hafu yechipiri uye isu hatidi kuida.
Zvirongwa zvinotibvumidza kutsanangura kana tichida kudzikamisa, semuenzaniso, kuita uku kusvika panguva dzatinobatana neWiFi, chimwe chinhu chinotofungidzira chakakosha kuchengetedza bhatiri. Zano rangu nderekudzima iro rekumashure chiitiko chehuwandu hwakawanda hwekushandisa, bhatiri rako rinozvikoshesa zvakanyanya.
Kunyangwe paine kupokana kukuru nezvazvo, nzvimbo yacho ndeimwe yemapoinzi akakosha kana uchidhonza bhatiri rako pasina mutinhimira kana chikonzero. Kune izvi isu tinofanirwa kufunga nezve akati wandei ma parameter, ese akanangana zvakananga nekushandisa.
Nokuda kweizvi isu tichaenda Zvirongwa> Kuvanzika> Nzvimbo uye mukati medu tichawana kuwanda kweanoshanda. Chinhu chekutanga kuve neye inodhura kwazvo yatinofanira kugadzirisa "Kana zvashandiswa" pane ese mashandisirwo, kuona kuti localization haisi kushandiswa zvisina basa.
Nekudaro, pane akati wandei ezvirongwa izvo zvinonyanya kukuvadza kune bhatiri uye zvinodaidzwa "System services" pasi chaipo penzvimbo dzenzvimbo dzataigara tichitaura nezvadzo pakutanga. Ndipo patinofanira kupinda hongu kana hongu nekuti aya marongero anonyanya kukosha.
Tichaenda takananga ku "Nzvimbo dzakakosha", iyo yekumisikidza nzvimbo nekure isinganyanyobatsira uye yakawanda bhatiri inopedza. Ini zvakare ndinokurudzira kuti iwe ubvise chigadzirwa chekuvandudza mashandiro, asi usambove iko calibration yekutamisa, iyo nguva yenguva kana zvimwe zvinoshanda zvine kukosha kwakakosha mukubatsira kwayo.
Otomatiki kupenya uye «simudza kuti uite»
Isu tave kutaura pamusoro peescreen marongero ayo akawanda ane tsika yakaipa yekumisikidza sezvavanoda nemhedzisiro yakaipa. Chekutanga ndiko kupenya kwechiso. Vazhinji vashandisi vanowanzo dzoreredza kupenya kwe otomatiki nekuti ivo vanoda kuchengetedza kupenya kwakaderera sezvinobvira.
Nekudaro, iwe ungangodaro uchikanganwa kuigadzirisa paunenge uchiiisa. Iyo iPhone ine yakanaka yekuvhenekera sensor iyo inokutendera iwe nakidzwa nemhando yechidzitiro uye kupenya kwakaringana nguva dzese, batidza otomatiki kupenya.
Kune rimwe divi, iyo iPhone ine iyo «Simudza kuti uite », Izvi zvichaita kuti screen ye iPhone itendeuke kana tichiifambisa mune chingave chiratidzo chechisikigo chekuisimudza kuti tizvizivise pachedu kuburikidza neFace ID. Nekudaro, izvi kazhinji hazvina musoro bhatiri rinodhonza
Ini ndinokurudzira kuti ubvise mashandiro aya, nekuti mukuita izvo skrini inotenderera munguva dzisina musoro, kunyanya kana iri mubhegi kana bhegi, zvakanaka zano rangu nderekuti iwe ubvise kuita uku nekukurumidza sezvazvinogona.
4G inokosha here?
Chimwe chezvinhu zvinotarisisa zvekushandisa bhatiri kufukidza, ese ari maviri WiFi uye kunyanya nharembozha. Mune ino kesi, vashandisi vazhinji havafungi kana zvichinyatso kukosha kuve ne4G yakavhurwa, uye ndezvekuti pane mashoma kesi mune iyo isingakurudzirwe.
Kuve nekushomeka kushoma kwe4G munzvimbo umo, zvisinei, 3G kufukidza kwakatsiga uye kwakakwirira, Kwete chete zvichaita kuti tifambe zvishoma nezvishoma, nekuti iyo 4G ichave isina kugadzikana, asi isu tinodya yakawanda kwazvo bhatiri nekuti iyo antenna ichave ichigamuchira yakawanda simba.
Ndokusaka ndichikurudzira kuti iwe uende Zvirongwa> Nharembozha> Inzwi uye data. Ikoko iwe uchave unokwanisa kusarudza pakati pe4G ne3G, zvirokwazvo kunyangwe mune mamwe makambani iwe unozogona kusarudza 2G, kunyange ini ndisingazvikurudzire pakati pegore 2020.
Ndiwo maitiro ari nyore iwe auchakwanisa kusevha yakawanda yebhatiri, neimwe yemazano echinyakare kudhara.
Matipi madiki ekuwana bhatiri
Usarambe uchidonhedza bhatiri pazasi pe20%, izvi zvinokonzeresa kupfeka.
Usatendere iyo iPhone kudzima isina bhatiri, izvi zvinokonzeresa kuti bhatiri ripedze kuputsa uye hauzove nemhedzisiro yakavimbika.
Tora mukana weiyo rima modhi, iko kushanda kunopa kuvandudzwa, kunyanya munzvimbo dzakaderera mwenje, uye iwe zvakare uchachengetedza bhatiri mumidziyo yeAMOLED senge iyo iPhone 11 Pro.
Ive nekuchengetera nemapikicha, kana iwe ukasarudza vatema mashure kana serima sezvinobvira, iwe unozochengetedza yakawanda bhatiri.
Uye aya anga ari edu matipi makuru ekuchengetedza bhatiri kune iyo yepamusoro. Tinokurudzira kuti iwe utarise vhidhiyo inotungamira iyi posvo uye nyorera kune chiteshi Yese Apple kwatinenge tichienderera mberi nekuisa idzi nhau uye zvimwe zvakawanda izvo zvinokutendera iwe kuti uwane zvakanakisa kubva kune yako iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Tricks yekuvandudza hupenyu hwebhatiri muIOS 14
Manheru akanaka ndabvisa nzvimbo dzakakosha asi anondinyevera kuti ndicharasa mashandiro muCarPlay mepu nezvimwe, ichi ichokwadi kana zvichakanganisa kufamba, kwaziso